Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili zaseThailand » I-Thailand iyimfama kwi-COVID-19 Surge: Pushes Phuket Sandbox
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Ingeniso yePokbox yeSandbox ibaluleke ngakumbi kunempilo
Ngaphandle kokunyuka kwamatyala e-COVID-19 kulo lonke elaseThailand, isithethi seZiko lezoLawulo lweMeko yezoQoqosho (i-CESA), u-Thanakorn Wangboonkongchana, utshilo namhlanje ukuba iphulo le-Phuket Sandbox kufuneka liqhubeke nohlengahlengiso olwenziwa rhoqo ukujongana nemiceli mngeni.
I-Phuket ithengise i-335,000 yehotele yokuhlala ubusuku ngexesha lika-Julayi-Septemba phantsi kwephulo leSandbox.
Ithagethi iyonke yengeniso yi-8.9 yezigidigidi ze-baht (i-US $ 265.9 yezigidi) ngeli xesha leenyanga ezintathu.
I-Phuket Sandbox okoko yaqala ukusebenza sele ivelise malunga ne-1 yezigidigidi ze-baht (i-US $ 29.9 yezigidi).
Impikiswano yeyokuba iphulo okwangoku sele lincedile ekudaleni imisebenzi, ngelixa lilungiselela izinto ezinomtsalane kwixesha lezokhenketho eliqhelekileyo ngasekupheleni konyaka. Urhulumente ubiza iziphumo zephulo lePhuket Sandbox ukuba lihle, siqhubela phambili ukuvula ilizwe lethu kubakhenkethi abagonyiweyo, ukuqala kwiphondo lesiqithi sasePhuket.
U-Wangboonkongchana uthe urhulumente ulindele ukuba eli phulo libone ukwanda komsebenzi ngo-Agasti nangoSeptemba, kujoliswe kubakhenkethi ababekwe kubantu abayi-100,000 ngoJulayi nangoSeptemba, kunye nethagethi yengeniso eyi-8.9 yezigidigidi ze-baht (i-US $ 265.9 yezigidi) kwangelo xesha linye. Ubize abantu belali ukuba babe ngabamkeli abalungileyo kwiindwendwe, zibanike umbono olungileyo ngelixa beqinisekisa ukhuseleko lwabo.
Iphulo lokuvula ukhenketho eThailand Ibhokisi yesanti yePhuket Sele ivelise malunga ne-1 yezigidi zezigidi ze-baht (i-US $ 29.9 yezigidi) ekuhambeni kwemali ukusukela oko ivulwa kwinyanga ephelileyo kwaye ukuza kuthi ga ngoku yamkelwe malunga ne-17,000 yokufika kwamazwe aphesheya, ngelixa i-335,000 yehotele yokuhlala ubusuku ibibhukishwe ngoJulayi-Septemba.